Ubuntu Touch OTA-18 efa misy izao, mbola miorina amin'ny Ubuntu 16.04 | Ubunlog
Ubuntu Touch OTA-18 efa misy izao, ary mbola miorina amin'ny Ubuntu 16.04
Araka ny voalahatra, ary roa volana aorian'ny fanavaozana teo aloha, UBports nipoaka la Ubuntu Touch OTA-18. Hotehiriziko izay eritreretiko momba ny kinova Ubuntu izay farafaharatsiny amin'ny PineTab-ko, tsy misy fampiharana ilaina, ary amin'ity lahatsoratra ity dia hifantoka amin'ny fanavaozana vaovao isika. Na dia ny marina dia manohy mandiso fanantenana noho ny antony hafa.
Xenial Xerus dia natomboka dimy taona lasa izay, ka nahatratra ny faran'ny tsingerin'ny fiainany izao. Eny, ilay OTA-18 vao natomboka mbola miorina amin'ny Ubuntu 16.04, noho izany dia mampiasa base ianao izay najanona tamin'ny volana aprily. Mampanantena hatrany izy ireo fa ny Ubuntu Touch dia hiorina amin'ny Focal Fossa tsy ho ela, saingy mbola tsy nisy izany ary tsy hitranga, farafaharatsiny ho an'ny kinova roa hafa. Etsy ambany misy lisitr'ireo zava-baovao miavaka indrindra tonga tamin'ny an'ity kinova ity, ary tadidinay fa amin'ny fitaovana PINE64 dia mandray isa hafa izy ireo.
Zava-nisongadina tamin'ny Ubuntu Touch OTA-18
Nexus 7 2013 (Wi-Fi sy LTE)
sony xperia x, Xperia X Compact, Fampisehoana Xperia X, Xperia XZ sy Xperia Z4 Tablet
Xiaomi Redmi 3s / 3x / 3sp (tany), Redmi Note 7 sy Redmi Note 7 Pro
Ny tany dia omanina hifindra amin'ny Ubuntu 20.04, ary nanatsara ny Lomiri izy ireo, ny fiankinan-doha sasany, ny fanekena ny dian-tànana, sns.
Nihatsara ny fahombiazan'ny fanovana ny tsipika kaody an'arivony.
Hafainganana ambony kokoa amin'ny ankapobeny.
Fitantanana RAM tsara kokoa.
Namboarina bibikely maro.
Miseho ho azy izao ny kitendry virtoaly rehefa manokatra kiheba vaovao ao amin'ny Morph Browser.
Niampy hitsin-dàlana Ctrl + Alt + T hanokatra terminal vaovao.
Ny sticker dia nampiana ho an'ny fampiharana fandefasana hafatra.
Ny famandrihana izao dia ahetsiketsika hatramin'ny fotoana nanamborana azy ireo fa tsy tamin'ny fanombohan'ny fanairana. Ataon'izy ireo koa izany rehefa very azy ireo isika, fa tsy ariana.
Feo miorina amin'ny Google Pixel 2.
Ny Ubuntu Touch OTA-18 dia azo alaina ao amin'ilay faritra fanavaozana ny rafitra miasa. ny OTA-19 dia hiorina amin'ny Ubuntu 16.04 tsy tohanan'ny intsony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Ubuntu Phone » Ubuntu Touch OTA-18 efa misy izao, ary mbola miorina amin'ny Ubuntu 16.04
Tsy ho an'ny zava-poana izany, fa ity rafitra fikirakirana finday ity izay avy amin'ny Ubuntu, any amin'ny fireneko dia tsy fantatra tanteraka ...
Mampalahelo fa tara izy ireo tonga tamin'ny fizarana mpampiasa ny rafitra fikirakirana finday ...
ary AO amin'ny tanànan'ny findaiko miaraka amin'ity rafitra fiasa ity dia toy ny hoe mitady matoatoa, tsy tazana na aiza na aiza ... Ary tsy milaza aho hoe tsara na ratsy, fa tsy misy toa izany.
Miarahaba anao, Mario Anaya avy any Arzantina
Izy ireo dia mitovy amin'ny ankamaroan'ny rafitra fiasa finday miorina amin'ny Linux. Angamba i Manjaro no mandresy amin'ny lalao satria nofidian'ny PINE64 izy, fa misy kosa ireo mazoto ihany koa. Ny zavatra ratsy momba ny Ubuntu Touch dia ny fanirian'izy ireo handrakotra betsaka sy hifanaraka amin'ireo fitaovana maro, ary izany dia mahatonga ny zavatra sasany tsy handroso firy.
Izahay dia manarona azy eto, fa farafaharatsiny mba tsy izao no safidy tsara indrindra.
Sweet Home 3D 6.5.2, fanavaozana an'ity fampiharana endrika anatiny ity
Wing Python 8, apetraho amin'ny beta amin'ny Ubuntu 20.04 / 18.04 ity IDE ity